Naya Post Nepal | टीका सानुको यो भिडियो हेरेर न’रुने को होला र? कठै के भयो ए”क्कासी (हेर्नुस् भिडियो)
टीका सानुको यो भिडियो हेरेर न’रुने को होला र? कठै के भयो ए”क्कासी (हेर्नुस् भिडियो)
काठमाडौं।आफ्नो सन्तानलाई एक्लै बे’साहारा छा’डेर प्रदेश ला ग्नुपर्ने बाध्यता छ नेपालि आमा हरु र बा,बु हरुलाई। आफ्नो सन्ता नलाई छा’डेर आफ्नो देश छा’डेर अ,र्काको देशमा काम गर्न जान त कस लाई हुन्छ र तर पनि आ,फ्नो घरको
प’रिस्थिति अनि सन्तानको भ’विष्यको निम्ति यो कदम चा,ल्ने पर्नी रछ। रुदै रुदै बाटो लागेकी आफ्नो आमालाई प,च्छा,उदै प’च्छाउदै गरेको आफ्नो सन्तानलाई नहेरी मुटु गा’ठो पारि बसमा हात ह’ल्ला उदै एक हातले आ’सुका धारालाई
बाटो लाउदै गरेको द्रिश्यले जो कोहीको पनि मन रुन्छ।कति दिन त भोकभोकै रात का’ट्नु परेको दिन अनि जाडोमा न्यानो क’पडा बिना दिन काटे का त्यो पलले जो कोहीलाई पनि प्रदेश को बाटो देखाउ छ।
गायिका टिका सानु र बाल गायक सुप्रिम मल्ल को दर्दनाक लाइभ दोहोरी सा’र्बजनिक भ’यको छ। यस,मा गायिका सानुले आमाको भूमिका निर्बाह गरेकी छिन भने सुप्रिमाले भने छोराको भू’मिका नि’र्बाह गरेका छन्।
उक्त लाइभ दोहोरीमा सबैका आखामा आ’सुका धारा बगि, रहेका हा,मीले देख्न सक्छौ। काल्प निक दोहोरी भ’यता पनि यथार्थ क’हा नीमा उ’क्त दोहोरी गायका हुन् दुइ कलाकारले। उक्त ला’इभ दोहोरी संगीतमाला ला’इभ दोहोरीको हो भने उक्त भि,डियो टिका सानु युटु ब च्यानल मा’र्फत बजारमा सा,र्बजनिक ग’रियको छ।
यो पनि ,, काठमाडौँ । साताको पहिलो दिन अर्थात आज (आइत बार) नेपाली बजारमा सुनको भाउ ब’ढेको छ । शुक्रबार प्रतितोला ६०० रुपैयाँले ब’ढेको सुनको भाउ आज आइतबार पनि प्रतितोला ७०० रुपैयाँले ब’ढेको नेपाल सुनचाँदी व्य’वसायी महासंघले नयाँ पुस्तालाई जा’नकारी दिएको छ ।
महासंघका अनुसार आज छा’पावाल सुन प्रतितोला ९३ हजार ४०० रुपैयाँमा का’रोबार भइरहेको छ। छा’पावाल सुन शुक्रबार प्र’तितोला ९२ हजार ७०० रुपैयाँमा का’रोबार भएको थियो। नेपाल सुनचाँदी व्य’वसायी म’हासङ्घले अन्तर्राष्ट्रिय सुनचाँदीको का’रोबार मूल्यका आ’धारमा दै’निक रुपमा सुन तथा चाँदीको का’रोबार मूल्य तो’क्दै आएको छ।
सुनको भाउ बढेसँगै आज चाँदीको भा’उ पनि बढेको छ । महासङ्घ का अनुसार आज चाँदीको मूल्य प्रतितोला रु १ हजार २७० रुपैयाँ मा का’रोबार भइरहेको छ। शुक्रबार चाँदी प्रतितोला रु १ हजार२६० रुपैयाँमा का’रोबार भएको थियो।
२०७८ पुष १८, आईतवार प्रकाशित 1 Minute 511 Views